”Waxaa jirta rajo taxaddar leh!” – Xiriirka Denmark, Maamulka Inter & UEFA oo ka hadlay xaaladda laacibka (Waxa laga yeelayo ciyaartii socotey?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaa jirta rajo taxaddar leh!” – Xiriirka Denmark, Maamulka Inter & UEFA...
”Waxaa jirta rajo taxaddar leh!” – Xiriirka Denmark, Maamulka Inter & UEFA oo ka hadlay xaaladda laacibka (Waxa laga yeelayo ciyaartii socotey?)
Waxaa haddaba laacibka si rasmi ah uga hadlay kooxda uu u dheelo ee Inter, Xiriirka dalkiisa Denmark iyo Xiriirka Kubadda Cagta Yurub ee UEFA.
INTER, MAROTTA: “WAXAA JIRTA RAJO TAXADDAR KU JIRO” ayuu yiri Agaasimaha Guud ee Inter, Beppe Marotta oo la hadlay Sky Sport.
DENMARK OO HADASHAY: “WUU SOO JEEDAA” Xiriirka K/Cagta Danish-ka ee DBU ayaa intaa xaqiijiyey: “Christian Eriksen wuu soo kacay isagoo yaalla isbitaalka Rigshospitalet si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo”.
SIDA AY WAX U DHECEEN – Laacibka ayaa kubbad u boos qaatay daqiiqaddii 43-aad, balse wuxuu si halhaleel ah ugu dhacay dhulka, laacibiinta oo markiiba gartay inay xaaladdu garaabo tahay ayaa u yeerey howlwadeennada caafimaadka.
Kaddib markii wadnaha muddo laga masaajeeyey ayaa waxaa lagu qaaday bareelle isagoo duuduuban, xilli ay cabsi darteed la ilmaynayaan laacibiinta, taageerayaasha iyo xaaska laacibka oo garoonka wada joogey.
Ciyaarta si rasmi ah ayaa loo hakiyey maadaama ay dhacday sida ay UEFA sheegtay “xaalad caafimaad oo deg deg ah”. Xog dheeri ah oo ciyaarta ku saabsan waxaa kasoo saarayaa 19:45 xilliga maxalliga ah.
War cusub oo haatan soo baxay ayaa sheegaya in ciyaartii Denmark iyo Finland oo horay loo hakiyey ay dib u bilaabmayso 7.30pm xilliga UK kaddib markii ay kasoo raysay xaaladda Christian Eriksen oo garoonka ku dhacay haatanna isbitaalka yaalla.
Previous articleSida uu noqday xaalka xaaska Eriksen & wararkii ugu dambeeyey ee laacibka + Sawirro
Next articleDEG DEG: Maxaa laga yeelayaa ciyaartii la sugayey ee Belgium vs Russia (UEFA oo war kale kasoo saartay xitaa middii hore)